सिजनको पहिलो ‘एल क्लासिको’ (बार्सिलोना र रियल म्याड्रिड) मा कस्ले मार्ला बाजी ? « News24 : Premium News Channel
सिजनको पहिलो ‘एल क्लासिको’ (बार्सिलोना र रियल म्याड्रिड) मा कस्ले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । स्पेनिस ला लिगाको नयाँ सिजन २०२१/२२ को पहिलो ‘एल क्लासिको’ अर्थात बार्सिलोना र रियल म्याड्रिडबीचको भिडन्त आइतबार हुँदैछ ।
एल क्लासिको क्याटलान क्लब बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा नेपाली समय अनुसार साँझ ८ः०० बजे हुनेछ । नयाँ सिजनमा रियल म्याड्रिडले उच्च प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । बार्सिलोना भने आफ्नो पुरानो लयमा फर्कन सकेको छैन ।
लिगमा अहिले दुवै टोलीले आठ खेल सकेका छन् । रियलले बार्सिलोनालाई दुई अंकले पछि पारेको अवस्था छ । यस्तोमा बार्सिलोना घरेलु मैदानमा रियललाई हराएर अगाडी बढ्ने दाउमा छ । रियल पनि बार्सिलोनालाई घरमै हार चखाउन चाहन्छ ।
चोटका कारण प्रमुख खेलाडीहरु मैदान बाहिर रहेकाले पनि बार्सिलोना सुरुवाती खेलमा समस्यामा परेको थियो । यता रियलले आठौं राउन्डमा स्पान्योलसँग २–१ को हार खेप्नु बाहेक अन्य खेलमा सानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
रियलका कप्तान करिम बेन्जेमा यतिवेला करिअरकै उच्च लयमा देखिएका छन् । उनले लिगको सुरुवाती आठ खेलमा नौ गोल र सात असिस्ट दिएका छन् । सर्वाधिक गोल कर्ताको शीर्ष सुचीमा रहेका बेन्जेमालाई भिनिसियस जुनियरको उतिकै साथ छ ।
भिनिसियसले पनि पाँच गोल सहित दुई असिस्ट दिएका छन् । यता बार्सिलोनामा मेम्फिस डिपायले सानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसै सिजन लियोनबाट बार्सिलोना आएका डिपायले बार्सिलेनामा लियोनल मेस्सीको अभावलाई पूर्ति गरेका छन् । उनले आठ खेलमा चार गोल सहित दुई असिस्ट दिएका छन् ।
बार्सिलोनाले एल क्लासिको भिडन्तमा अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर सर्जियो एग्युरो र औसमाने डेम्वेलेलाई समेत उतार्ने तयारी गरेको छ । यसअघि यी दुई स्टार घाइते थिए । यसै सिजन इङ्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीबाट बार्सिलोना आएका एग्युरो सुरुवातमै अभ्यासको क्रममा घाइते भएका थिए ।
ला लिगाको एल क्लासिकोमा हालसम्म यी दुई टोलीबीच एक सय ८२ खेल भएको छ । जसमा रियलले ७५ खेल जितेको छ । बार्सिलोनाले ७२ खेल जितेको छ । ३५ खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
सबै खाले एल क्लासिको भिडन्तमा यी दुई टोलीबीच कूल दुई सय ४६ आधिकारिक खेल भएका छन् । जसमा रियलले ९८ खेल जितेको छ । बार्सिलोनाले ९६ खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ । ५२ खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
सबै खाले एल क्लासिको खेलमा रियलले ४१० गोल गरेको छ भने बार्सिलोनाले ४०१ गोल गरेको छ । रियल र बार्सिलोनाबीचको आइतबार हुने खेल दुई सय ४७औं आधिकारिक एल क्लासिको भिडन्त हुनेछ । यसमा कस्ले बाजी मार्ला ? भन्ने चासो र कौतुहलता विश्वभरका फुटबल समर्थकमा छ ।
एल क्लासिको प्रतियोगिता इतिहासका कारण पनि प्रख्यात छ । ऐतिहासिक दृष्टिबाट हेर्दा बार्सिलोना र रियल म्याड्रिड स्पेनका दुई ठुला शहर हुन् । जहाँ दुई फरक राजनीतिक मत पाइन्छ ।
सामान्यतः बार्सिलोना समर्थक क्याटालोनिया समर्थक छन् भने रियल म्याड्रिड समर्थक स्पेनिस सरकारनिकट हुन्छन् । यी दुवै क्लब संसारकै सबभन्दा धनी र सफल क्लब मानिन्छन् ।
१६ बर्षपछि मेस्सी र रोमोसविनाको एल क्लासिको
विश्वकै चर्चित लिगमध्येको एक स्पेनिस ला लिगा फुटबल पहिलो पटक नेपालमा डिशहोम एक्सन स्पोर्ट्स एचडी टेलिभिजनमार्फत प्रतक्ष हेर्न पाइने ब्यवस्था छ । बार्सिलोना र रियल म्याड्रिडबीचको ‘एल क्लासिको’ भिडन्त पनि एक्सन स्पोर्ट्स एचडी २ मा प्रतक्ष प्रशारण हुनेछ ।
ला लिगाको नेपालका लागि पे टिभी तथा डिजिटलको विशेष प्रसारणको अधिकार डिशहोमले प्राप्त गरेको हो । ला लिगाका हरेक खेलहरु एक्सन स्पोर्ट्स एचडी २ मा प्रशारण भईरहेको छ । त्यसका लागि डिशहोमको ग्राहक भने बन्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल डिशहोमको ग्राहकलाई ला लिगाको सिजन टिकट सिम टिभी, प्रभु टिभी र डिश होमको ओटीटी (डिशहोम गो) मार्फत उपलब्ध छ ।